Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF): dimy ny kandidà hifaninanan ho filoha | NewsMada
Hifantohan’ny sain’ny rehetra, taorian’ny lalaon’ny “Can 2019”, natrehin’ny Barean’i Madagasikara, ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Dimy mirahalahy mianaka ny hiady izany toerana izany.
Rabekoto Raoul Arizaka, filoha lefitra faharoan’ny federasiona teo aloha. Andriamiasasoa Doda, filohan’ny federasiona nandimby an’i Ahmad. Rakotomamonjy Neypatraiky, filoha lefitra voalohan’ny federasiona teo aloha. Rasoamaromaka Hery, mpitantana ny fanamboarana ny kianja synthètique ary i Mohamad Abdillah, mpitsara baolina kitra iraisam-pirenena. Ireo izy dimy mirahalahy mianaka hifaninana ho filoha hitantana ny federasiona malagasin’ny baolina kitra.
Raha zohina, olona efa nilona naharitra ao anatin’ny tontolon’ny baolina kitra avokoa izy rehetra ireo ary samy nametraka tantara tsara ho an’izany taranja izany avokoa. Samy manana ny vina hampivoarana sy hampiroboroboana ity taranja ankamamian’ny vahoaka malagasy ity avokoa izy rehetra ireo. Efa samy nahazo ny fankatoavan’ireo ligim-paritra araka ny lalàna mifehy ny fifidianana ireo kandidà dimy ireo.
Heverina fa tsy misy handiso fanantenana ny mpankafy izay ho lany hitantana izany. Na ireo tsy ho lany aza, tsy maintsy hanome tanana sy hanampy izay ho filoha vaovao eo satria ny baolina kitra no jerena sy iarahana mibanjina fa tsy sanatria fitiavan-tseza. Nisy ireo kandidà efa nitonona ny hirotsaka niala an-daharana ka nanohana kandidà, tamin’ity. Eo koa nefa ireo izay mihazakazaka mirotsaka ho komity mpanatanteraka.
Kandidà iray ihany ny tsy afaka nirotsaka tamin’ity, Ramisamanana Lova, filohan’ny fikambanana Alefa Barea. Tsy nisy ligy nanome fankatoavana azy mantsy ka izao izy tsy afaka hilatsaka izao.
Tsiahivina fa hotontosaina ny asabotsy 24 aogositra izao ny fifidianana ho filohan’ny federasiona ka handatsa-bato ireo ligim-paritra 22, hifidy ny ho filoha vaovao eo.